Myanmar na-abanye n'oge ememme
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Myanmar na-abanye n'oge ememme
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • Akwụkwọ akụkọ Myanmar • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Septemba bụ ọnwa ememme na mmemme na Mianmaa, nke mere ka ọ bụrụ ezigbo oge iji gaa na mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ka ndị Buddhist Buddhist na-akwado ịbanye na njedebe nke Mbinye Buda Buddha, obodo ndị gbara mba ahụ gburugburu na-akwado maka ọtụtụ ememme ndị ga-ahụ ndị obodo si n'akụkụ niile na-eyi uwe ha kacha mma, na-agba ọsọ ụgbọ mmiri, na-enye elephant ndụ. puppets na puru iche na nde nde mmanu mmanu - ha nile gha adi n’onwa Septemba rue nmalite nke onwa iri. Oge a na-adabakwa na njedebe nke oge akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-ekwe nkwa ọdịdị ala, ọnọdụ zuru oke na gburugburu 25-30 Celsius na ahịa kachasị mma na azụmahịa na họtel.
N'ikwekọ n'ememe ndị na-abịanụ, Myanmar Tourism Marketing amalitela kalenda ihe omume na ibe Facebook ya, ebe ọha na eze nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara ememme ndị ahụ na ebe ndị ha nwere mmasị. Kalenda ahụ na-enyekwa nduzi n'oge a na-ahụ maka ememme ndị a na-agbakọ na kalenda ọnwa Mianmaa, yabụ na ọ nwere ike ghara ịghọta ha n'ụzọ dị mfe A na-emelite ibe a kwa ụbọchị ma na-eje ozi dị ka ihe bara uru na nke bara uru maka ndị njem. Ọ na -echekwa akụkọ mgbe niile gbasara ihe ndị mere na mpaghara ndị njem na Myanmar tinyere vidiyo, foto, blọọgụ njem na ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ.
Ahịa ahịa njem nlegharị anya nke Myanmar na-agba ndị njem nleta na ndị nta akụkọ si n'akụkụ ụwa niile ume ka ha jiri anya ha hụ ọmarịcha Myanmar ma sonye n'ememe ndị ahụ.
“N’agbanyeghi onu ogugu ndi njem nleta na Myanmar na onu ogugu, onu ogugu ndi njem nleta si mba ofesi na-eleta ebe di ka Bagan ma obu Inle Lake bu nani ndi mmadu 280,000 kwa afo, ya mere enwere ohere buru ibu iji nabata ndi ozo. Site na itinye kalenda nke ihe omume ndị a pụrụ iche na Facebook, anyị na-atụ anya inyere ndị njem nleta na ndị ọbịa ndị ọzọ aka ịhazi njem ha na ma ọ bụ gburugburu Myanmar, "ka Ma May Myat Mon Win, Onye isi oche ahịa ahịa nke Myanmar kwuru.
Fọdụ n'ime ememme ndị na-abịanụ na Myanmar gụnyere:
Ememme Manuha Pagoda (Bagan, September 4 - 6, 2017)
A na-eme Ememme Manuha Pagoda maka ụbọchị atọ malite na ụbọchị tupu ụbọchị ọnwa zuru ezu nke Tawtalin (ụbọchị ga-adịgasị iche dabere na kalenda Myanmar). Ndị bi na Myinkaba Region na-enye achịcha osikapa na nke ndị na-eme oyi n'oge oyi. A na-ekwu na omume ọdịnala a sitere n'oge Eze Manuha, a ka nwere ike ịhụ ya n'ememe taa. Ndị mọnk na-agbakọta n'oge ememme iji nweta onyinye nri na nnukwu efere onyinye na Pagoda. A na-eme asọmpi agba akwụkwọ papier-mâché n'oge ememme Manuha Pagoda, ị ga-ahụ usoro agba agba gburugburu obodo ahụ n'ụdị nke Manuha King n'onwe ya, agụ, ehi, enyí, ịnyịnya, wdg.
Ememme Phaung Daw Oo Pagoda (Inle Lake, Septemba 21 - October 8, 2017)
Ememme pụrụ iche nke ụgbọ mmiri nwere ihe ruru 50 ma ọ bụ 60 ụkwụ na-adọkpụ ụgbọ mmiri nwere ihe oyiyi Buddha dị nsọ site n'otu obodo gaa na nke ọzọ na ọdọ mmiri. A na-amakarị usoro ịhazi oge naanị izu ole na ole tupu oge eruo ma na-enwe mgbe ụfọdụ "ụbọchị izu ike". Gbalịa ịnọ n'ụgbọ mmiri nke onwe gị na ọdọ ma jụọ onye na-akwọ ụgbọ mmiri ka ọ jụọ ebe usoro a ga-agafe ma ị nwere ike ijide n'aka ịme ụfọdụ nnukwu onyonyo nke usoro a. Ọ bụ ememme mara mma ileta ọ bụ ezie na ọ nwere ike jupụta ntakịrị. Mee atụmatụ inwe ụbọchị ole na ole na Inle Lake iji jide n'aka na ị gaghị echefu usoro ahụ.
Festivalgba egwu enyí (Kyaukse, October 4 - 6, 2017)
Kyaukse, ihe dị ka awa atọ site na Bagan (otu anya site na Mandalay) bụ onye ama ama maka akwa akwa elepi-mâché elephant mere ebe a. Mụ nwoke abụọ yi ekike elephant na-egosi ịgba egwu acrobatic n'okporo ụzọ Kyaukse. Ezigbo ememme iji hụ ndụ ime obodo na Myanmar, ma nwee obi ike, enweghị ezigbo enyí sonye na ememme a.
Thadingyut - ememme ọkụ (Mba niile, October 4 - 6, 2017)
Njedebe nke Buddhist Lent bụ oge ịkwanyere ndị nne na nna, ndị nkuzi na ndị agadi ùgwù. N'ụbọchị ọnwa zuru ezu na Ọktọba (mgbe mgbe n'etiti Ọktoba) ụlọ na pagodas na-enwu kandụl. Ọ bụrụ na ị nọ na mba ahụ n'ụbọchị a, gbanye kandụl n'akụkụ ụlọ nkwari akụ gị ma jegharịa n'obodo ahụ na mgbede (ma ọ bụ gaa na Shwedagon Pagoda na Yangon ma ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ) wee nwee ọ atmosphereụ ikuku ikuku.
A ga-enwekwa ememme ndị pere mpe (pwe) haziri na obodo niile dị na Mianmaa, nke na-abụkarị ụdị ntụrụndụ, ntakịrị ohere ịzụ ahịa na ọtụtụ nri.